यी हुन् मन्त्रीमण्डलमा समेटिने नयाँ नाम, को को बाहिरिँदै ? - Sidha News
यी हुन् मन्त्रीमण्डलमा समेटिने नयाँ नाम, को को बाहिरिँदै ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच यस विषयमा कुराकानी भएको छ । उनले क्याबिनेटमा केही मन्त्रीहरुलाई राखेर सेट नै परिवर्तनको तयारी गरेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भ्रमण सम्पन्न गरी फर्केको भोलिपल्टै उनले त्यसको तयारी सुरु गरेका हुन् । तयारीका लागि ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । नयाँ मन्त्रीहरुको सूची तयार गर्ने गरी छुट्टिएका दुवै नेताहरु बुधबार पुनः बैठक बस्ने भएका छन् ।
अबको मन्त्रिमण्डलमा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र भर्खरै मन्त्री भएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई बाहेकलाई हटाउन चाहेका छन् । प्रचण्डले पनि बुहारी विना मगरलाई मन्त्री कायमै राख्न खोजेका छन् ।
अबको मन्त्रिमण्डलमा परिवर्तन भएमा महेश बस्नेत आउने पक्का छ । उनी विगतमा पनि मन्त्री भएर चर्चामा आएका थिए । बस्नेत ओलीका प्रीय हुन् । उपसभामुखबाट राजीनामा दिलाएर डा। शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ ।
ओली निकटस्थ विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ । डा। युवराज खतिवडाको स्थानमा पौडेल आउन सक्ने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । तनहुँबाट चुनाव जितेका किसान श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ । उनलाई वामदेव गौतमको दरिलो समर्थन छ । पूर्व एमालेबाट ओलीको नजिक रहेका नयाँ अनुहार पनि आउने भएका छन् । ओलीले महिला र दलितबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउन चाहेको बुझिएको छ ।
पूर्व माओवादीबाट टोपबहादुर रायमाझी, जर्नादन शर्मा, अग्नि सापकोटा, प्रभु शाहको सम्भावना बलियो छ । पम्फा भुषाललाई यसपटक मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ । भुषाल हक्की भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउँदा आफ्नो पक्षको प्रभाव बलियो हुनसक्ने आधारमा पूर्व माओवादीभित्र छलफल चलिसकेको छ । केही नयाँ अनुहार पनि मन्त्रीका सम्भावित छन् ।